သန့်စင်ငြိမ်းချမ်း| January 5, 2013 | Hits:8,205
Shwe Yoe January 5, 2013 - 11:02 am What did Maung Aye know about Paper Mills? Inspection byageneral who knew nothing about business? Oh! This is the Burmese way. Thein Sein knows nothing about runninganation too. That’s why the Union is going nowhere.
Reply Myo Nyunt January 5, 2013 - 11:34 am အဲတာ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ဦးအောင်သောင်း
Reply pps၁၂၃၄၅ January 5, 2013 - 2:41 pm မှန်ပါ့ဗျာ။ ဓါတ်ပုံမှ ရှေ့ဆုံးက ပါတဲ့ သူ့ဆွေမျိုးကြီးပါ ပါလိုက်သေး။ တရုတ် ပေါက်ဖေါ်ကြီး လက်ချက်ဗျာ။
Reply Stone Cold January 7, 2013 - 10:52 am Myo Nyunt and Aung Thaung. Sound familiar.
Reply သာပေါင်းစက်ရုံဝန်ထမ်းတစ်ဦး January 5, 2013 - 1:40 pm သာပေါင်းစက်ရုံ ကို ဦးနေ၀င်း အဖမ်းခံရပြီး ဦးမောင်အေး အာဏာ တက် နေချိန်၊၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းနှင့် ဦးမောင်အေး နှင့် ဆွေမျိုးစပ်နေချိန်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ပွဲစားမှာ မန္တလေးမြို့နေ ဦးရစ်ချတ် ဆိုသူဖြစ်သည်။ ကန်ထရိုက်မှာ China metallurgical Construction Company ဖြစ်ပြီး စက္ကူ လုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံ မရှိသော လုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ ထပ်ဆင့် ကန်ထရိုက်တာမှာ ဆွီဒင် အခြေစိုက် Akzo nobel နှင့် ဂျပန် အခြေစိုက် Asahi Kasei Company တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုစီမံကိန်း၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၁၃၀ ၀န်း ကျင်ဖြစ်သည်။ ထိုစီမံကိန်းနှင့် အတူ တပ်မတော် ဗိုလ်ချုပ် အဆင့် အရာရှိကြီးများ စီးရန် Toyota landcruiser (brand new) အစီး ၆၅ စီး ပါဝင်လာပြီး အစီး ၆၀ ကို တပ်မတော်သို့လွှဲအပ်ခဲ့သည်။ ထိုစီမံကိန်း တည်ဆောက်ရေး ၏ စစ်အစိုးရ ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ အနောက်တိုင်း နိုင်ငံများမှ ပစ္စည်းများဝယ်ယူ ခြင်းဖြင့် အနောက်တိုင်းနှင့် ယုံကြည်မှုပြန်လည် တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ Chloine ဖြင့် ပျော့ဖတ် ချွတ်သော စနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်။ တရုတ်ပြည်တွင် အသုံးပြုသော စနစ်မှာ H2O2 ဖြင့် ချွတ်သော စနစ်ဖြစ်သည်။ ထိုစနစ်ကို မကျွမ်းကျင်မှု နှင့် ၂၀၀၃နောက်ပိုင်း အနောက်တိုင်း ပိတ်ဆို့မှု များကြောင့် နည်းပညာပိုင်း တွင် ပြဿနာ ဖြစ်နေသော စက်ရုံဖြစ်ပါသည်။
Reply Stone Cold January 7, 2013 - 10:58 am Oh! Whatastory. Wolves and foxes always cheat and steal. As long as these wolves and foxes are holding on to power, Burma is going nowhere but still full with hardship.
Reply maung January 5, 2013 - 2:25 pm စွန်. ပစ် အ မိူက် ပုံ့ စက် ရုံ လား ဒေါ် လာ သန်း ၉၀ ကျော် ပေး ရ တာ.ဘယ် သူ အ ကျိုး ရှိ တဲ့ စက် ရုံ လဲ.
Reply pps၁၂၃၄၅ January 5, 2013 - 3:45 pm သန်း ၉၀ + လန်ခရုဇာ အစီး ၁၀၀(ဗိုလ်ချုပ်တွေဖို့)
Reply Myo Nyunt January 5, 2013 - 3:46 pm တချို့စက်အဟောင်း တွေက ရန်ကုန်ရောက်မှ ဆေးသုတ်ပြီး
Reply k.nagoya January 5, 2013 - 5:33 pm မောင်အေး သာပေါင်း စက္ကူနှင့် ပျော့ဖတ် စက်ရုံတွင် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးနေစဉ် ။တဲ့ နေပါဦး ဒီ လူကဘာနားလည်လို့ ကြည့်ရှု စစ်ဆေးရတာလဲ လူမိုက်ကောင်းစားတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ မသေနိုင်ဘူး
Reply မှန်မှန်ပြောလိုသူ January 6, 2013 - 8:06 am စီးပွားရေးတွက်ချေကိုက်မကိုက်စီမံသူကအစကတဲကသိရမယ်၊တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံခြား
Reply maung January 7, 2013 - 2:16 pm ပြည် သူ့ ငွေ တွေ ပြန် ပေး ပါ.အကြွေး ဆပ် ချင် လို့ ပါ
Reply မျိုးချစ်သူ January 6, 2013 - 2:17 pm နောက်ဆုံးတော့ ကျောက်ဆည်သား အောင်သောင်းကြီးတို့ ကျက်သရေ မရှိတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ဝန်ကြီး မောင်သောင်းတို့က ဒီလိုပဲ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့တာလေ။ အရေးအခင်း ဖြစ်ရတာ စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေကြောင့် ဆိုတဲ့အငြိုးနဲ့ ဝန်ကြီးမောင်သောင်းက GTI တွေကို တက္ကသိုလ်ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်တပ်ပြီး BE ဘွဲ့တွေကို ရိုက်ထုတ်သလို ပေါပေါလောလော လုပ်ခဲ့တာလေ။ ရှက်တတ်ရင် သေလိုက်ဖို့ ကောင်းတယ်။
Reply oomoe January 7, 2013 - 10:12 am စစ်ခေါင်းဆောင် မှူးကြီးသန်းရွှေ ရဲ့စီမံကိန်းကြီးပါ(သူတာဝန်ကျခဲ့ဘူးသည်နေရာ)